कोभिड-१९बाट उत्पन्न नवीन प्रकृतिको आर्थिक महामन्दीले नेपाली मिडियामा गम्भीर असर - आर्थिक पाटी
२०७७-०३-१५ बिचार / प्रतिक्रिया
नेपालको मिडिया क्षेत्रमा १ खर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा लगानी भएको बताउने गरेको छ नेपाल मिडिया सोसाइटीले । आधिकारिक तथ्यांक भने कतै छैन । सबै लगानी जोड्दा “समग्र मिडिया उद्योगमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भएको देखिन्छ,” पौडेल भन्नु हुन्छ । यहाँ सान्दर्भिक कुरा, नेपाली मिडियाले मुनाफा कत्ति गर्छन् र उनीहरुले पत्रकार, कामदारलाई दिने (वा नदिने) तलब, सेवासुविधा कत्तिको न्यायोचित छन्?
सबै लगानी जोड्दा “समग्र मिडिया उद्योगमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भएको देखिन्छ,” नेपाल विज्ञापन संघ (आन)का पूर्वअध्यक्ष निर्मलराज पौडेल भन्नु हुन्छ । यहाँ सान्दर्भिक कुरा, नेपाली मिडियाले मुनाफा कत्ति गर्छन् र उनीहरुले पत्रकार, कामदारलाई दिने (वा नदिने) तलब, सेवासुविधा कत्तिको न्यायोचित छन्?
महामरीवीच भीमकाय आर्थिक संकट त छँदैछ, बित्त व्यवस्थापन योजना र संचारकर्मीहरुप्रति उचित न्यायको अभावमा विश्वासको संकट अझ दुरगामी र महँगो हुनेछ ।